Madota eUsingagumi: Kukwirisa kuri kuendeswa kuGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Madota eUsingagumi: Kukwirisa kuri kuendeswa kuGNU / Linux
Nhau dzakanaka, parizvino zano revhidhiyo mutambo Ashes of the Singularity: Escalation iri kuiswa parizvino kuitira kuti mune ramangwana tigone kunakidzwa nayo mukuparadzira kwedu kweGNU / Linux. Iye zvino tinogona kuiwana muValve's Steam chitoro uye mamwe mavhidhiyo mapuratifomu ekutengesa emamwe masisitimu, uye ndinovimba kuti munguva pfupi tinogona kuiwana yeLinux. Saka mutambo wevhidhiyo wakakura unowedzerwa kune iyo rondedzero yeavo vanofarira iyo GNU / Linux inoshanda sisitimu sepuratifomu yevatambi.
Iye munhu anotungamira chiziviso ichi anga ari iye CEO weStardock Varaidzo iye pachake mumibvunzo yakabvunzwa kuburikidza neSteam mubvunzo uye mhinduro tambo. Ichashanda zvakanyanya mukati memwedzi mitanhatu inotevera, saka basa rakawanda richiripo kune vanogadzira kuitira kuti isu pakupedzisira tive nemusoro unowanikwa kune yedu yatakada chikuva. Uye zvakare, CEO akataura kuti zano rake riri kufamba mushe uye kuti kuva nemusoro weLinux chiroto chinoitika kwaari.
Kune avo vasingazive zita rekuti, Ashes of the Singularity: Escalation, iri zita remazano rauchazotarisana nenyika ine hukasha, mubatanidzwa mumashure mezera revanhu uyo ​​uchafanirwa kurwira kutonga kweiyo giraxy, nemamepu asingafungidzike uye ese akarungwa neinjini ine simba, yekutanga 64-bit RTS, inonzi Nitrous. Pamusoro peizvi, mutambo uyu unonakidza hunyanzvi hunyanzvi, sezvo yaive imwe yekutanga kutsigira Vulkan uye ichaitawo zvakadaro paLinux, chimwe chinhu chiri danho rakakura kubva kuOpenGL.
Muchidimbu, chinodhaka uye chinokwezva chinyorwa chine ongororo dzakanaka kwazvo maunofanira kuita mazano akanakisa kukunda muhondo, pamwe nenguva dzekuvakwa kwezvivakwa, ongororo yehunyanzvi, zvombo, hurongwa hwehupfumi hwekugadzirisa, nezvimwe. Pamusoro peiyo modhiyo yemushandirapamwe, tichakwanisa kutamba mumodi yevakawanda nevamwe vashandisi pasirese pasirese ... Kubva kuLxA ticharamba tichiteerera kuti tione kana chiziviso chinotevera chemutambo wevhidhiyo chichiitika uye ndinovimba kuti tichava nayo inowanikwa munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Madota eUsingagumi: Kukwirisa kuri kuendeswa kuGNU / Linux
Ichokwadi ndechekuti ini handigone kumirira kuti ndiise maoko angu pazviri. Hazvingave zvakaipa kuve nemhando yepamusoro yeRTS mutambo mune yedu system, uye kana ikaenda neVulkan zvirinani.Tinovimba nguva dzakatarwa dzakazadziswa…. uye zvipikirwa.
Iyo inotevera vhezheni yeUbuntu ichadaidzwa kunzi Ubuntu 18.04 Bionic Beaver
Linux Pane Galaxy, iyo itsva kusangana kwe Samsung uye Gnu / Linux